Inona ny karazana tranonkala ho ahy ao amin'ny tranokalako?
Eto izahay dia hiresaka momba ny webbacklinks ho an'ny tranonkalanareo. Raha ny marina, ny rindran-damba tsara ihany no afaka manao tsara ny tranokalanao. Manana adiresy an-tserasera ireo tranonkala rehetra mety ho lasa loharanom-baovao lehibe indrindra sy ambony indrindra ho an'ny mpihaino azy na ny tsenan'ny varotra fandraharahana. Ny zava-drehetra dia miasa fotsiny - maro kokoa ny mpampiasa mivezivezy mankany amin'ny tranonkalan'ny tranonkala hitady vaovao, vokatra na serivisy. Noho izany, ny fanontaniana dia hoe - karazana tranokala ho anao ve tokony ho an'ny tranonkalanao? Eny, andeha hojerentsika ny fomba fanaovana ny baolin'ny fahombiazana mihodina. Voalohany indrindra, hampiseho aminao aho hoe inona no mahatonga ny webbacklinks kalitao, ary ahoana no ahafahanao mahazo betsaka amin'izy ireo miaraka amin'ny rafitra fananganana rindrambaiko avo indrindra. Ka andeha aloha.
Quality VS. Ny isan'ny
Ankoatra ny aterineto, amin'ny tena fiainana, ireo toro-hevitra ireo dia tsy miasa raha tsy avy amin'ny toerana mendri-pitokisana. Raha tsy izany, tsy misy antony tokony hanarahana azy ireo, sa tsy izany? Mihevitra ny rehetra fa ny webbacklinks rehetra dia sahala amin'ireo soso-kevitra kely, ny rohy tsirairay dia tsy maintsy tonga avy any amin'ny toerana misy ny PA na (pejy fahefana), PR (laharana laharana), ary DA (tompon'andraikitry ny sehatra). Amin'izany fomba izany, ny kalitaon'ny tranonkala webback izay ho azonao ho an'ny tranonkalanao dia zava-dehibe tokoa, fa tsy ny habetsahany.
Ary ny tokony hotadidintsika dia ny hoe manana fifandraisana tsara dia midika hoe mihazona ny maha-zava-dehibe azy. Mampiditra azy amin'ny teny Anglisy Plain, rehefa hitan'i Google fa ny sasany amin'ireo tranonkala avy aminao dia avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera, izay tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitra, hahafantaran'izy ireo azy ho toy ny spam amin'ny natiora, i. f. , hevero ho tsy manan-danja ary manome azy farafaharatsiny farafahakeliny. Ankoatra izany - ny tranokalan-tserasera dia mety hahazoana sazy am-pahamendrehana napetraky ny Google, vokatr'izany fiaraha-miasa mampiahiahy izany izay matetika mifandraika amin'ny karazana fanararaotana, na fihetsika manipulation.
Tokony hitranga amin'ny toe-javatra faran'izay ratsy indrindra, ny famaizana faran'izay henjana dia mety hahatratra hatramin'ny fametrahana ny tranonkalanao ho tsy hita mihitsy ho an'ny mpikaroka miaina - izany hoe midika fa tsy voasariky ny fahefana nomenao ny tompon'andraikitry ny sehatra ianao indray mandeha ary ho an'ny rehetra. Noho izany, avelao hiatrika izany - ny webbacklinks dia tokony ho toetra tsara foana. Izany no antony mampidi-doza ho an'ny fividianana na fanandramana hiarahana amin'izy ireo.
Ahoana àry ny fomba hahitana ireo toerana mety hahazoana rohy azo antoka sy mahomby? Eny, andeha isika handinika drafitra fohy fohy mba hamitana ilay asa. Ity ambany ity ny lisitra fohy momba ny biletà mba hanampy anao hifindra amin'ny làlana marina:
Mitadiava antoka fa manome ny tena lanjany ny tranonkalanao - mamorona afa-po tsy manan-tsahala sy mahasoa afa-tsy amin'ny lohahevitra izay mety miarahaba anareo mba handefa lahatsoratra na hizara izany ao amin'ny tranonkala.
Aza misalasala manamarina ny tranonkalan'ny mpifaninana aminao - inona no atao hanaraka ny fitafy, ary inona avy ireo lafiny tsy tsara. Mitadiava fomba fijery mahasoa amin'ny soso-kevitra ilaina amin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera toy ny Semalt Analyzer, Mikiakiaka, na Moz ao amin'ny Open Site Explorer.
Miresaha amin'ny influencète'ny indostria, manomboha podcast, manao lahatsoratra boribory marobe ary aza misalasala mankany amin'ny blôgin'ny vahiny - ary mety ho azonao atao ny mividy tranonkala malaza ho valiny.
Raha ny marina dia tsy tokony hangataka rohy amin'ny kalitao ianao, eny fa na dia ireo manana fahefana sy manan-kaja aza. Midika izany fa mandoa vola kokoa ianao - amin'ny fampiasana ny votoatin'ny tambajotra sosialy sy manolotra votoaty tsara (toy ny infographics, latabatra, votoaty hafa hafa), ary koa ny fampiasana fotoana vitsivitsy mba hanomezana ny fanomezana sarobidy ho an'ny mpihaino anao. toy ny sehatry ny fikarohana momba ny haino aman-jery, sehatra fianarana, sns Source .